Nenguva iyo pasi pano mbeu inogona kukura nekubereka zvibereko zvayo munguva. Chero bedzi mumuviri kunogona kufungidzira chipfeko chinoputika umo chichagara chisingafi.
Hauna kupinda munzira inoenda kuchiedza here? Zvino chiuya chinogona kuenderera mberi, kusvikira pasina chakamira pakati peChokwadi chisina kutaurwa newe.
Vol. 2 OCTOBER, 1905. Nha. 1
PAKUTANGA kwechitendero chakashinga, chechimiro chakanyanyisa, kana pfungwa dzisina kufanirwa, yakatendwa uye inofungidzirwa nevamwe vane zvishuvo uye manzwiro avo akasimudzirwa uye anokurudzirwa, kuti mweya mumwe nomumwe wepamweya unofanira kutarisa wawakaroorana naye mune zvepabonde kana ukabudirira mu nyika, kana kufambira mberi pakunamata. Uyezve, uye nenzira yechikonzero cheizvi, zvinonzi mweya wakanga uripo kubva pakutanga, asi nekuda kwechivi chekare chakaparadzaniswa sevarume nevakadzi-saka kusuwa uye kushuva kwehupenyu hwomunhu hwakasiyana. Izvo, mushure mekudzungaira kwaro munyika, nenzira yekuregererwa kwechivi chayo, mweya unoguma uwana "waro" kana "imwe hafu," uye ungadai uchingopinda panguva iyoyo yehupenyu hwakakwana hunozivikanwa chete nemweya pamwe mweya. Iko kune zvakawanda zvakasiyana-siyana zvemazwi maviri emweya. Ichabvumira kutamba kwakakwana kune nyanzvi yezvinyorwa, uye ichazvikweretesa kune mafiropu anongopesana; asi iyo ndiyo dzidziso inotungamirira kumagumisiro asina kufadza. Kana kufungisisa pamusoro paro kuchaita kuti pfungwa ione kana kuti ichitaridzire "mweya-mutevedzeri," uye, chokwadi kune mutemo wekupa uye kuda, mumwe achauya. Asi, "mukomana" angave ane hukama hwemhuri hunofanira kurambidza kutenda kwakadaro. Dzimwe nguva, vanhu vaviri vanozviwana ivo vanobvumirana kune mumwe nemumwe vakakodzera mafungiro emweya wemapapiro ekuzvidavirira pamanzwiro avo, uye anozivisa kuti mumwe nomumwe anofanira kunge akaitwa kune mumwe, uye semweya yavo mapatya ivo vanofanira kunge vari mumwe kune mumwe. Apo nhanho iyi yekutenda yasvika pakunyadzisa ndeyechokwadi kuitevera. Ipapo "mweya-varo" inotaura kuti havanzwisisi uye vanotambudzwa uye kuti isu tose tiri kurarama pasi pemamiriro enhema. Asi vazhinji, avo vekutanga vaiziva kuti vakanga vawana "mweya-vakaroorana," vakave nechikonzero gare gare vachida kuti vanga vasina. Izvo zvinodaro dzidziso yemadzimai e mweya ndeimwe zita rechirevo ichi.
Iyi dzidziso yemapatya-mweya ndiyo imwe yenzira dzakaipa zvikuru dzezera ripi zvaro. Iyo inoedza kuderedza mweya kune ndege yekuita zvepabonde, inoputsa ukama hwemhuri yekugutsa chido chemhuka, uye inogona kuvhara chido chemuviri pasi pejasi remweya.
Mweya wemapatya ndiwo pfungwa yakatsauka yakatorwa kubva munhoroondo yemashiripiti yekare. Zvakarehwa navo kuti, pakutanga, vanhu vakanga vasina kufanana nezvino-zvakaratidzwa kuva miviri yevarume nemadzimai-asi kuti vanhu panguva iyoyo vaisanganisira zvose zvepabonde mune imwechete, kuti vanhu ava vaiva nemasimba akafanana neavo vamwari; asi pashure penguva isinganzwisisikwi nhangemutange yevanhu-mukadzi akava varume nevakadzi vezuva redu uye, saka vakapatsanurana, vakarasikirwa nemasimba aimbova avo.
Vakuru vekare vakanyora nhoroondo yekare yavo, avo vanogona kuiverenga munhema uye chiratidzo chinopiwa.
Asi zviri nani nekuda kwechokwadi kupfuura nhoroondo kana nhema, muviri wemunhu unochengetedza zviitiko zve nguva yose.
Muviri wemunhu mukurudzirwa kwawo unozarura uye unoratidza zvinyorwa zvekare.
Kubvira pakuvambwa kwevanhu kusvika panguva ino, nhoroondo yaro inotsanangurwa mukurudzirwa kweumwe munhu. Uyezve, humwe uprofita hwemangwana ravo huri mune zvakakonzerwa kubva kare.
Embryological development inoratidza kuti mumatambo ayo epakutanga fetus haina kuita zvepabonde; gare gare, kunyange zvazvo zvepabonde hazvisi pachena, kuti muzvokwadi ndeye vaviri-vanoita zvepabonde; achiri mberi, kuti zvinganzi ndeyekadzi. Inova mukomana chete mukufambiswa kwayo kwezvino. Anatomy inoratidza zvakare chinhu ichi chinokosha: kuti mushure mekuzadzwa kwakazara kwepabonde kune zvimwe zvichiri kuchengetwa mumutumbi mumwe nomumwe chimiro chakakosha chechikadzi chakasiyana. Zvinonzwisisika kuti mukubudirira kubva kune vanhu vaviri vanoita zvepabonde mukadzi ari kuratidzwa kutanga.
Muviri womunhu ndiwo mumiririro uye kuguma kwezvikamu zvina zvakasiyana mukushanduka-shanduka, imwe nhanho inoputira nguva yakawanda yenguva. Chikamu chemuviri chezvikamu izvi zvino zvinofananidzirwa isu nemaminerari, yemiriwo, mhuka, uye nyika yevanhu. Mune mineral, fomu inotanga kuratidzira kuratidzika kune yekutanga, asi gare gare, kuburikidza nekushanda kubva mukati maro pachayo, uye kuburikidza nekuita kwemasimba magnetic, anozivikanwa nesayenzi se "chimiro chemakemikari, chimiro chekriststal yakakwana inogadzirwa. Nezvikamu zvekutanga zvechimiro mu mineral, upenyu hunotanga kuratidzwa muchikamu chechipiri uye hunoonekwa mune zviratidzo zvekutanga zvehupenyu hwemichero, asi gare gare, nekubatsirwa magnetic simba uye kuburikidza nekukura nekuwedzera kubva mukati memiti, hupenyu -cell yakagadzirwa uye yakabudiswa. Iyi nzira inozivikanwa kune biology uye physiology semutambo we "budding." Panguva yekukura kwehupenyu hwemichero, chishuwo chinotanga kuratidzwa nekuvandudzwa kwehutano mukati mehupenyu-kero, kubva kune iyo gare gare, nekuwedzera kwehupenyu uye kukwezva kwechido, mhuka-cell inogadzirwa uye inoparadzaniswa kuva masero maviri akaenzana akaenzana, ose ane zvifananidzi zvakafanana. Iyi danho rechitatu rinonzi "cell-division". Mukufambisa kwekupedzisira kwechikamu chechitatu, mhuka-sero inoratidzira zvepabonde uye inoda kubatana kwemasero maviri evanhu vakasiyana nepabonde kuti vaparidzire, sezvo zvisingagoni zvakare kuramba vari mhuka kuburikidza "nekuparadzaniswa "Chete. Nekukurudzirwa kwepabonde mumhuka, chirwere chechina chevanhu chinotanga apo utachiona hwepfungwa hunenge huri kuratidzwa nekufungisisa mukati memhuka-chengesi, uye hunoendeswa kune chimiro chevanhu, icho chinowedzera kuburikidza nekudzika kwepfungwa.
Izvi zvikamu zvina zvekukura zvinorondedzera kushanduka kwemitumbi yatinayo iye zvino. Miviri yepakutanga yakakura yakanga ine maitiro echikristal uye yakanga isina zvishoma pane chiedza chezuva. Muchikamu chekristal chaive chakanaka chemunhu wepamangwana. Zvisikwa zverudzi urwu zvakanga zvakakwana mukati mavo. Havana kufa, uyewo havangamboregi kuva kwenguva yakareba sekuti zvinhu zvose zvichapfuura, nokuti zvinomiririra mafomu akakodzera mushure mokunge marudzi ose ave ezvo uye achavakwa. Kutanga kwenguva yechipiri kwakaratidzwa nekristal-yakafanana yakasikwa yekutanga yokutanga ichibva mavari maovaleso e-opalescent kana mazai-samafomu; mukati meii-sechimiro chakanga chine mararamiro ehupenyu ayo akadanirwa kuita basa nekufema kwekriststal sphere, uye mazai-sechimiro, zvakare, akaita kuti nyaya iri nyore kuratidze. Iyi nhangemutange yechipiri yevanhu yakapfuurira ivo pachavo kuburikidza kuisa maitiro akafanana neavo muhumiro, asi kuva mukati meii-sechimiro chakafanana necheputi, iyo yakaita sedenderedzwa yakashandurwa kuitira kuti iite seine mutsara wakarurama. Chimwe nechimwe chakazvibatanidza nacho uye chakanyangarika muchimiro chakanga chaiswa. Nguva yechitatu yakatanga neaya-mafomu akafanana nemakwikwi evadzidzi wechipiri akanga atanga. Ivha-sechimiro chakafanana chakanyorovesa chakakomberedzwa nechepakati pezvisikwa zvezvinhu zviviri zvepabonde, murume nemukadzi ari mumuviri mumwe. * Chido chakasimudzirwa murudzi urwu rwevanhu vanhurume pamwe nevamwe uye vamwe vakatanga kubvisa simba ravakaberekwa naro . Kubva kuhupenyu uye masimba masimba mukati, izvi zvakagadziriswa, uye, kubva kune izvo zviri muhupenyu hwevanhu ikozvino umbilicus, fomu yemhepo inoburitswa iyo yakadzivirirwa zvishoma nezvishoma uye yakasimbiswa mumhando yakafanana neyo yaibva. Pakutanga izvi zvakaitwa nevashoma chete, asi pakupedzisira mujaho wakatevera muenzaniso wavo. Maitiro akafanana nekriststal akafukidzira vamwe veavo vakatanga kutanga. Iyi ndiyo nhangemutange isingaoneki iyo inoramba iri sevadzidzisi vevanhu. Dzimwe dzakafa, asi dzinowanikwa muvana vavo † Mitumbi yakagadzirwa yakava yakaoma uye yakawanda yakawanda uye panguva yekutanga yakatanga kuva nemumwe wemhando dzepabonde dzinorehwa kupfuura imwe, kusvikira pakupedzisira vakanga vasingakwanisi kusimbisa uye kubudisa, mumwe nomumwe iro roga, sezvo nhengo dzebonde dzisina kunyanya dzikava shoma shoma. Ipapo imwe neimwe yakabatanidzwa nedzimwe zvepabonde uye yakabudisa rudzi rwevarume nevakadzi sezvatinovaziva iye zvino.
Mumazuva okutanga ekusimudzirwa, kukwikwidza kwekristin-spheres kwakapa kukurudzira kushanduka kwezvisikwa zvavanotaura, asi vakaramba vari kunze kwezvose zvakazotevera kusvikira vanhu vakaita zvepabonde vakatanga kutanga nekukura kuita zvepabonde. Zvadaro maitiro akafanana nekristaro akafukidzirwa uye akafuridzira kuburikidza nemitumbi inobudiswa nekubatana kwenyama. Kubvira panguva iyo makore akapfuura, asi ma kristal akagara ari kusangana nevanhu kuburikidza nepfungwa. Kubva kwavari pfungwa inowanikwa, uye kubva mupfungwa mutumbi unotora uye unotora fomu yavo yevanhu. Nokusangana kwepfungwa nekristal-sphere vanhu vanofanirwa kuve vakangwara vasina kufa, sezvakaitwa zvipenyu zviviri zvekare.
Zvose izvi zvingaita sezvisinganzwisisiki kune avo vanozvinzwa kwenguva yekutanga, asi izvozvo hazvigone kubatsirwa. Zvichaita sezvisinganzwisisiki kana ukafungisisa uye ukadzidziswa muchiedza chekufananidzira kwembryological uye kukura kwehupenyu. Sekudzidza nekufungisisa hunoenderera mberi chirongwa chichazonzwisiswa.
Sayenzi yepabonde ndeyekuziva nzira yekugadzira miviri yakakwana kwazvo. Unyanzvi hwepabonde ndewokuziva chinangwa chemitumbi nekushandisa zvakanakisisa kwavari. Chitendero chekuita zvepabonde ndiko kutungamira hunyengeri kuti huve nekunyatsove kubatana.
Ihwo hupi huri huri munyika ino, hupombwe kune nyika inoratidzika. Zvepabonde ndiyo yakakwana, yakarongeka, kutaura kweDuality. Zvose zvakasikwa ndizvo
Izvo zvepabonde zvinofanira kuva zviyero kana zviridzwa izvo pfungwa dzinodzidza kuenzanisa uye kuzvienzanisa pachavo munyika ino, uye kuburikidza iyo mazamu ehupenyu anofanirwa kutungamirirwa muchimiro. Asi nemafungiro emafungiro, kuva mitezo yekuita zvepabonde, zvepabonde zvakazoshandurwa kuva mhirizhonga uyo ane uye ari kushungurudza uye kunwisa dambudziko. Muhedheni akaisa chisimbiso chake pamunhu, uye munhu akabatwa musimba raro semaketani esimbi. Kuita zvepabonde kwakava muranda uye ikozvino kunomanikidza pfungwa kuti iite zvinopesana nezvinodiwa zvekufunga, saka zvakakwana simba rayo kuti rudzi rwevanhu sehondo huru rwakanyorerwa kurwisana nemafungiro, nemitemo yenguva nenguva, izvo zvepabonde inofanira kutongwa. Kuregeredza mitemo iyi, marudzi nemadzinza zvakaderera pasi pehuwandu hwemhuka ndokupfuura pasi pemvura yekushivirira.
Zvepabonde chinhu chisingazivikanwi icho vanhu vose vanouya munyika ino vanofanira kugadzirisa. Kune avo vachiri pasi peuranda hwavo, zvepabonde zvinofanira kugara zvisinganzwisisiki. Kugadzirisa chakavanzika chepabonde ndiko kuzvisunungura kubva pazvisungo zvaro, uye kukwanisa kutungamirira mazamu ehupenyu kusvika kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira.
Muchivanzika chekare zvakataurwa kuti neophyte yakatangwa muchirevo chemashoko mana aya: Ziva, Dare, Will, Siling. Munhu akanganwa kana akarasika nzira yekumusuo weZvenhema. Asi nhema uye chiratidzo zvinogara zvichingova zvapupu zvekuti temberi yeZvino muviri wevanhu.
Murume kana mukadzi ari hafu yevanhu, uye kuroorana ndiyo yekare kare masangano evanhu vedu. Zvepabonde zvinosanganisira mamwe mabasa. Basa rokutanga uye rinonyanya kukosha revanhu nderokuroorana; kwete kuroorana nekuda kwekunyadzisa kwemazwi, asi kubatana uko vanhu vacharamba vachiita uye vakakwana munhangemutange. Basa remunyika nderokuti zviviri zvepabonde zvakatarisana zvinofanira kufanana mune imwechete yekubudisa rudzi rwakakwana, rudzi urwo rungasanganisira zvose baba naamai mukati mavo. Basa roga roga roga roga nderokuti umwe neumwe anofanira kunge akaenzana kune imwe mune mumiedzo uye kutarisirwa kwehupenyu, sezvo chimiro cheumwe neumwe chinopa kune imwe zvidzidzo zvinonyanya kudiwa kurongedza, kusimbisa, nekuputira humwe hwehumwe , chimwe nechimwe chiripo, sechimwe, chinopesana kana kuti chinopesana nemunhu wacho. Zvose izvi zvinoshanda kune zvidzidzo izvo vanhu vari kudzidza kuchikoro chinonzi nyika, uye kune avo vanozogara upenyu hunofadza munyika.
Dambudziko repabonde rine chinyorwa chakadzika. Pane imwe njodzi mukufambisa mberi, nekuda kwekugona kwekusanzwisiswa uye kushandiswa kushandiswa mune chimwe chezvikamu zvemafungiro emweya-mapatya. Ichi chakavanzika chichava nzira yekuwana chinangwa chitsvene chekuroorana chakange chave chirevo chezvinyorwa zvezvinyorwa zvinyorwa, zvezviratidzo zveRicicrucians, uye vefilosofi nguva dzose. Ndiko, chokwadi, kuti mumunhu uri munhurume nemukadzi: kuti mukati memurume pane mukadzi anogona, uye mukati memukadzi pane munhu anogona. Nhangemutange yekutanga yekutanga, iyo yerudzi rwedu ndiyo migumisiro, inoramba ichimiririrwa kumunhu wese sehuMwari huripo. Chimiro chevanhu vedu vaviri vanoita zvepabonde vanoita zvepabonde chinofanirazve kusimbiswa mberi kwehupenyu hwaMwari, crystal sphere, inogona kuve yakakwana. Izvi zvinogona kuitwa chete nekuziva uye nekuchenjera, mushure mokunge tadzidza zvidzidzo izvo miviri yedu yemazuva ano inodzidzisa. Chikonzero chekukwezva kwepabonde imwe neimwe kune imwe yacho inokonzerwa nechido chekutaura uye kukura kwesimba rakasiyana iro riri mairo, uye nokuti imwe yepabonde ndiyo inoratidza kunze uye kufungidzirwa kwechimwe chikamu chayo pachako mukati. Imba yezvokwadi inoitika apo zvose zvisikwa zvakanyatsoenzaniswa uye zvechokwadi zvakabatana mukati meumwe. Izvi zvinogona kuitwa chete mushure mekuona kwenguva refu muhupenyu hwakawanda uye mushure mokunge kuzvipira kwave kuwanikwa. Inodzidziswa nezvose izvo hupenyu hwemunhu hunogona kudzidzisa, uye kune munhu pakupedzisira anozivikanwa, kuti pane chimwe chinhu icho hupenyu hwehupenyu hunogona kugutsa. Izvi zvinokonzerwa nedzimwe rutivi rwehupenyu hwemunhu achiedza kuzviratidza kuburikidza nekusagutsikana nehupenyu hwehupenyu, nechishuwo chemukati chekubatana nevanamwari, nekuda kurasa upenyu, kana zvichidikanwa, nokuda kwezvakanaka kana zvakanaka yevamwe, nechinangwa chemukati chepamweya chemweya, uye kukura kwe rudo rwechokwadi rwuri kure kure nechinhu chipi nechipi chepanyama. Rutivi rwomukati rwomunhu pachako harungaratidzi seimwe yemhando dzakanaka dzemhepo dzinogona kuuya nezvivimbiso uye zvido. Izvozvo ndezvemangariro uye dzinofanira kubudiswa kunze kweparley. Manzwiro emumwe wepabonde anotamirwa kune ari mukati, uyo anopindura sekuti kuzvipira kunoratidzwa. Sezvo kuzvipira kusinganzwisisiki kunopiwa mupfungwa uye kubasa, ndizvo zvakaitawo mumwe wega anopindura mukati ((pasina) kunze kwomuviri wenyama. Kana izvi zvaitika, chinetso chepabonde chichave chakashanda. Munhu uyo ​​uyo waanoitwa naye haazodi kuti ave mumuviri wezvepabonde zvakare nokuti ikozvino yakaparadzanisa masimba ekuberekwa achave akabatanidzwa mune rimwechete rinogona kukurudzira uye kuunza miviri, kana iri "kuda," sezvakaitwa nhangemutange yechitatu yechitanhatu, iyo yaiva chiratidziro chacho.
Pakati pekuchinja kwemuviri kunotangira mararamiro aya echokwadi, ndiko kumuka kuhupenyu hwehumwe huri huno hutano huri hutachiona (hwakafanana nehupineal gland) munzvimbo dzisina mweya dzisina upenyu dzouropi.
Rega pfungwa nemwoyo zvigadziriswe pakuwana kuenderera mberi kusinganzwisisiki Kuteerera, uye pasina chimwe chinangwa, sekuguma. Kuve nekusvika kwatiri mamiriro edu ezvino ekuvandudzwa kwemazana makore akave akadikanwa pakuvakwa kweimwe miviri. Makore angave akadikanwa pakuvakwa kweimwe miviri iyo inofanisisa kuratidza nekupindura kune zivo. Nguva yacho ifupi uye nzira inopenya kana iri kuziva, kwete muviri, watinotsvaka. Ipapo tinopa muviri wose nezvose zvakakosha kukosha kwekushandira. Nokuti miviri yose inokosha maererano nekubatsira kwayo mukusvika pakuziva, kwete nekuda kwemuviri wayo kana maitiro ayo. Kana isu tichidaro tinonamata pfungwa pamusoro pezvose izvo miviri yedu ichakurumidzirwa kuchinjwa uye kupiswa nechiedza.
Iyi ndiyo chikamu chekuita zvepabonde mukupedzisira pakuwana Kuziva.
* Nhangemutange yevanhu iyi inofananidzira muBhaibheri munyaya yaAdhamu-Evha, vasati vadya aporo rezivo uye vakabereka vana.
† Iyi ndiyo mhedzisiro yenyaya ye phoenix, shiri yakachena pamwe chete nevanhu vekare. Zvinonzi iyo phoenix yakaonekwa pane imwe neimwe inodzokera kune imwe nzira uye yaizozvipisa pachayo paatari, asi yaizosimuka zvakare kubva mumadota ayo maduku uye akanaka. Nokudaro zvakaratidzwa kusafa kwayo-kuburikidza nekuberekwazve. keyed to the law of sex, and cells in our bodies are working to this end.